C/qaasim Salaad oo ka hadlay khudbadii dhiillada xambaarsaneyd ee Shariif Sh. Axmed – Maanta Online
C/qaasim Salaad oo ka hadlay khudbadii dhiillada xambaarsaneyd ee Shariif Sh. Axmed
C/qaasim Salaad Xasan Madaxweynihii hore oo degan magaalada Qaahira ee wadanka Masar ayaa markii ugu horeysay hanjabaadii Shariif Sh. Axmed uu u jeediyay dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo, wuxuuna C/qaasim ku taliyay inaan la kicin shacabka isla markaana Madaxweynayaashii hore ka shaqeynin wax kasta oo dalka gelinaya qalalaase hor leh.
Madaxweynihii hore C/qaasim oo u waramayay mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho ayaa sheegay in loo daayo Golayaasha sharci dejinta inay la xisaabtaan haddii xukuumadda ku dhaqaaqdo tallaabooyin ka hor imaanaya dastuurka dalka.
“Hadalka Shariif ma aheyn mid ku haboon qof madaxweyne soo maray” ayuu yiri C/qaasim Salaad Xasan oo ka digay cawaaqibka ka dhalan kara hanjabaadda Shariif oo uu sheegay inay tahay mid abuuri karta xasarado iyo dagaallo dalka mar kale burbur u horseedaya.
C/qaasim Salaad Xasan mar uu ka hadlayay kulanka madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya, waxa uu sheegay inuu horseedayo heshiis iyo is afgarad dhex mara labada dal ee deriska ah isaga kaashanayaan danaha ay wadaagaan.
Isagoo ka hadlayay xaaladda nabadgelyada dalka, waxa uu sheegay Madaxweynihii hore C/qaasim in ciidamada dowladda ay halgan xoogan ugu jiraan sugidda amniga iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab ee ka horjeeda Dowladda iyo AMISOM.
“Al-Shabaab waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan dhiigga shacabka iyo dilka qof Muslim ah oo aan waxba galabsan” ayuu yiri C/qaasim Salaad oo sheegay in Shabaabka ay akhriyaan Qur’aanka Kariimka ah ee tilmaamaya sida uu Alle SWT u karaameeyay bani’aadamka isla markaana hal qof oo xaq darro lagu dilo inay la mid tahay iyadoo la dilay dadka oo dhan.
← CUMAR FILISH: “Shabaab abaabulan ayaa doonaya inay Muqdisho soo weeraraan”
Somalia to Push for Voter Registration Ahead of 2021 Elections →
Qaar ka mid ah Musharaxiinta Jubbaland Oo Ka Soo Horjeestay Dalab Uu Gudbiyay James Swan